को हुन् शेरधन राई ? जसले मुख्यमन्त्री सजिलै पाए – Kathmandutoday.com
को हुन् शेरधन राई ? जसले मुख्यमन्त्री सजिलै पाए
काठमाण्डु टुडे २०७४ माघ २६ गते १६:०७ मा प्रकाशित
विराटनगर, २६ माघ – शेरधन राई बुबा जागिरमान राई तथा आमा राम्रीमाया राईको कोखबाट २०२७ साल फागनु ११ गते आमचोक गाउँपालिका साविकको थिदिङखा गाविस भोजपुरमा जन्मिएका हुन् । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका राई २०४४ सालमा राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् ।राईले तीन वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका छन् । एमाले वैकल्पिक पोलिटव्युरो सदस्य रहेका राई प्रदेश १ का सह–संयोजक हुन् ।
शुक्रबार दिउँसो मोरङको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा भएको मतदानमा राई प्रदेश १ एमाले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका हुन् । एमाले सचिवसमेत रहेका भीम आचार्यलाई पराजित गर्दै पोलिटब्युरो सदस्य राई प्रदेश १ को संसदीय दलको नेता बनेका हुन् । संसदीय दलको नेता बनेसँगै राईको प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ ।
एमाले संसदीय दलको नेतामा विजयी भएका राईले २६ मत ल्याएका छन् । उनीसँग पराजित एमालेका सचिव तथा प्रदेश नम्बर १ का संयोजक भीम आचार्यले २४ मत ल्याएका छन् । एक मत भने बदर भएको छ ।
यसअघि संसदीय दलको नेतामा दाबी गर्दै आएका नेता जीवन घिमिरेले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि दुई नेताबीच भिडन्त भएको हो । संसदीय दलको नेताका लागि राईको उम्मेदवारीमा प्रस्तावक र समर्थकमा सुनसरीका जगदीश कुसियत र झापाका हिक्मत कार्की थिए । संसदीय दलको नेतामा विजयी राई एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट हुन् भने पराजित आचार्य वरिष्ठ नेता झलना खनाल र माधव नेपालनिकट हुन् । अन्नपूर्ण पाेस्टबाट
सेनाले ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट सिफट् गराउँछ !
नेपालमा कोरोनाको नयाँ भाइरस प्रवेश
जनयुद्धको नेता प्रचण्ड र जबजको नेता माधव नेपाल भएको पार्टी नै मुलधार होः पुन
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रष्टीकरणः मैले न्यायाधीश भेटेको छैन
नेपाली सेनाद्वारा हतियारसहित पाँच पक्राउ